OMN: Oduu (Onk 2, 2021) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOMN: Oduu (Onk 2, 2021)
Mootummaan rakkoo geejibaa duraan hin turre uumuun Irreecha Hora Arsadii danquuf yaalaa jira jedhame.
OMN: Onkololeessa 2, 2021
Ayyaana Irreecha Hora Arsadii Bishooftuutti guyyaa borii geggeeffamu ilaalchisuun, mootummaan qaamolee nageenyaafi poolisii ramaduun jala bultiirraa kaasee to’achuuf yaalaa jiraachuu maddi OMN hime.
Irreeffattoonni miliyoonaan lakka’aman Irreecha Hora Finfinnee erga xumuranii booda, gara Bishooftuutti fuula qajeelfachaa akka turan kan himu maddi OMN dubbise, Magaalaan Bishooftuu keessummoota hedduu keessummeessuun qophii Irreechaa akkaatuma baratameen simachaa jiraachuu dubbata.
Haa ta’u malee mootummaan baayyina hirmaattotaafi mormii irreessa Finfinnee irratti isa mudatetti rifachuun, akka uummatni gara Hora Arsadiitti hin dabarreef dhorga jira jechuun hime.
Konkolaattonni dhuunfaafi uummataa magaalaa Finfinnee irraa namoota fe’anii gara Bishooftuutti adeemaa jiran bakka Biyyoo Diimtuufi Moojoo jedhamutti akka ittifaman ajajni qaama olaanurraa darbe jedhamuun, hirmaattonni akka karaatti deebi’an gariin ammoo akka miillaan adeemanii gara Bishooftuu dhaqan taasifamaa jira jechuun dubbate.
Irreeffattoonni miliyoonaan lakka’aman kanneen magaalaa Bishooftuu seenanii jiranis, hoteelotaafi daandii gubbaatti sakkatta’amuun, gariin poolisiin butamaa jiraachuus maddi OMN kun himee jira.
Mormiin irreeffattoonni guyyaa har’aa Finfinneetti dhageessisaniifi haalli Naannoo Hora Finfinnee ture mootummaa rifaasisuusaa dubbii rogeeyyiiwwan mootummaa marsaa Hawaasummaa irratti maxxansaa jiran irraa hubachuun ni danda’ama jechuun maddi OMN kun hime.
Yeroo ammaa kana poolisii Federaalaa, Oromiyaafi raayyaan Ittisa biyyaa magaalaa Bishooftuu keessatti Konkolaataa guguddaan socho’aa jiraachuufi tikoonni mootummaas bobbaafamuun sabboontota adamsaa jiraachuu OMN odeeffateera.
OMN Horn Oduu (HAGAYYA 6, 2021)
OMN: Oduu (Hag 19, 2021) OMN Horn: Odeessaalee Har'aa (Hagayya 19, 2021) OMN : ፔንዱለም(Aug…